Vagadziri Dhairekitori - B2B Musika - Vatengesi Ruzivo
pano pa Alietc takazvipira kuumba yepasirese B2B pamusika izvo zvinounza pamwechete vagadziri, vatengesi uye vatengi, kubatsira kutanga pamwe zvakabatana uye kwenguva refu, zvechigarire hukama hwebhizinesi.
Kiyi yekubudirira se mugadziri inogona kuzorora pazvinhu zvinoverengeka, zvimwe zvinosanganisira zvigadzirwa zvako, asi zvimwe zvinosanganisira mabatiro aunoita nevanozotenga vatengi. Kuwedzera mikana yako yekubudirira paAlietc, isu takanyora izvi zvinobatsira Gadziriso Yemugadziri kukubatsira iwe kudzivirira kazhinji kukanganisa kwakawanda kunoitwa kana uchiedza tengesa zvigadzirwa.
Iyo kiyi yekugadzira hukama inobudirira nevatengi ndeyekunyanyisa pane zvaunovimbisa
Naizvozvi, tinoreva kuti zviri nani kuva nemaonero ekubata nguva nenguva uye kwete kuita vimbiso dzenhema maererano nemhando yezvigadzirwa. Hukama hwakanaka hwekushanda hunovakirwa pane chinhu chimwe chete uye iko kuvimba. Kumisikidza kuvimba kunofanira kuve iko kwechinangwa chekutanga paunenge uchiita nemutengi mutsva. Izvo zvakakoshawo ndeyekuvimba nekuuya kwekuvimbika. Kana iwe uchigara uchiendesa neyakaipiwa nguva yakapihwa, kana kana kumberi, mutengi angaenda kune imwe nzvimbo, kunyangwe kune mumwe munhu arikugovera chigadzirwa chakafanana nemutengo wegumi muzana?
Tarisa pane kudzora mhando
Mutengi wako anogona kunge akakukumbira sampule yechigadzirwa (chako) iwe kugadzira. Iwo ma samples aunotumira anorehwa kuve echokwadi uye echokwadi kuratidzwa kweyakajairika mhando yako zvinogadzirwa. Chero chigadzirwa chaunotumira kumutengi ichocho chinofanirwa kunge chakafanana, kana kuti zviri nani mhando uye kwete kusarudzwa kwevamwe zviri nani, zvimwe zvakafanana uye zvimwe zvakaipa. Iwe unofanirwa kushanda neyakaomeswa mhando yekudzora maitiro usati watumirwa kune chero mirairo kuti uve nechokwadi chekuti mutengi havazovi nechikonzero chekunyunyuta kana vogamuchira yavo yekuraira. Zvekare zvakare, kana iwe uchiendesa pane mhando, nguva nenguva, nei a mutengi Tarisa kumwe kunhu? Zvakachipa kwazvo kuchengetedza mutengi pane kuwana imwe nyowani.
Taurirana zvakajeka uye kazhinji
Kukurukurirana chinhu chakakosha chehukama hwebhizimisi chero ripi zvaro uye zano rakanaka kuzviisa pashangu dzemutengi wako kana zvasvika pakutaurirana navo. Kazhinji vatengi uye vagadziri vanogona kuwanikwa zviuru zvemakiromita zvakasiyana, uye kana mirairo yakaitwa kana samples dzakumbirwa, mumazuva anotevera, hapana chakanyanya kuipa kumutengi pane kunyarara kwakazara. Kunyangwe iri parunhare rwekufona (iyo yekubata inobata inogamuchirwa nguva dzose) kana nemaemail, ita shuwa kuti mutengi wako anonyatsoziva zviri kuitika neodhiyo yavo.
Kana chigadzirwa (s) chasvika, iwe uchiri kuda kutaurirana nemutengi kuti uve nechokwadi chekuti ivo vari 100% vanofara neodha yavo. Izvi zvinoita kuti vazive kuti iwe unonyatsoda nechavo huwandu hwekugutsikana uye zvinokutendera kuti urembedze chero matambudziko kana kuita chero zvinogadziriswa kumangwana remangoda. Sezvambotaurwa, chengetedza mutengi pane wana imwe.
Mbiri inoverengerwa pane zvese
Pano paAlietc isu tinoshanda system yemhinduro kune vagadziri, vatengesi uye vatengi. Isu tinokurudzira vashanyi kusiya mhinduro yakatendeka nezveiye munhu / bhizinesi ravanga vachiita naro. Iyi mhinduro yakakosha, iwe ungave uri mutengi kana mutengesi, sekunaka mukurumbira wako, vanhu vanonyanya kuda kuita bhizinesi newe.
Kune munhu wese kana bhizinesi raunosangana naro, iwe unofanirwa kugara uchivavarira kuchengetedza mukurumbira wako uye kuvavarira kuti vakusiire iwe unopenya 5 * ongororo nguva dzese dzaunoita bhizinesi navo. Zviri nyore kuti uzviwane, zvakare EA $ Ai-putieuphiiii
Kunyora Chako Chigadzirwa (s) pane Alietc
Isu takupa iwe zvishandiso zvese zvaunoda kuti ugadzire maziso-ekubata zvigadzirwa zvinyorwa. Nekudaro, zvaunotaura nemifananidzo yaunosarudza kushandisa zviri kwauri.
Isu tinokurudzira kuti iwe utsanangure zvakajeka uye zvakajeka chigadzirwa chimwe nechimwe chaunotengesa, uchirangarira kusanganisira neruzivo izvo vatengi vanogona kunge vachikwezva.
Usamiririre nhema zvigadzirwa kana mazuva ekutakura. Kwete chete izvi zvichazounza kukuodza mwoyo kumutengi wako, asi zvichavaona vakasarudza kuita bhizinesi kumwewo.
Ndokumbira uzive kuti kana tikagamuchira kakawanda zvichemo pamusoro pekugadzira, havangabvumirwe kuramba vachishandisa Alietc yekutengesa chikuva.
Hapana chinorova mufananidzo wemhando yepamusoro. Iwe uchaona pasi pezvinyorwa zvinyorwa zvaunogona kusanganisira imwe, kana akati wandei zvigadzirwa zvezvinhu zvaunoda kutengesa. Nemifananidzo yemazuva ano yedigital hapana pembedzo yemifananidzo isina kunaka-mhando.
Kusarudza nzira yekutengesa zvigadzirwa zvako paAlietc
Iwe une sarudzo munzira yaunosimudzira zvigadzirwa zvako. Kana iwe uri kushanda munzvimbo inokwikwidza zvikuru, ungasada kuburitsa mutengo wako, kana kungave kuti unopa zvakanyanya kuderedzwa matengo ehuwandu hwakawanda / kudzokorora kuraira. Kana iwe uchida kuchengeta rutivi rwemari rwezvinhu zvakavanzika, saka ingoisa "Tisanganisira nemutengo wepamusoro". Izvi zvinoshandawo zvakanaka kune zvigadzirwa kukosha kwayo kunogona kuchinja zvichienderana nemasimba emusika uye mutengo wezvinhu zvakagadzirwa.
Neimwe nzira, iwe unogona kupa chigadzirwa chako nekukumbira kupa asi usiri kupa mutengo (kunyange iyo mutengo wemutengo unogona kubatsira). Tora vanhu kukumbira pane zvigadzirwa zvako uye nenzira iyoyo iwe unogona kuzarura nhaurirano, chimwe chinhu chinogona kushomeka kana iwe uchipa mutengo wakamira.
Kutengesa pamutengo wakasarudzika kunogona kushanda zvakanaka kana iwe uchiziva kuti mutengo wako unokwikwidza zvakanyanya, uye iwe unoda kurova vaikwikwidza.
Kuwana zvikumbiro kubva kune vatengi
Zvese zvigadzirwa izvo iwe zvawanyora sezviri kugadzirwa nekambani yako zvichave zviripo pane yedu yekutsvaga injini. Semhedzisiro, kana mutengi ari kutsvaga chimwe chigadzirwa uye achikuona iwe uchachigadzira, vachakwanisa kukutumira chikumbiro chemutengo.
Kusarudza yako chinzvimbo nhengo
Isu takagadzira matatu matatu ehuhu mamirioni, imwe yacho inofanirwa kukodzera iwe zvakakwana. Sarudzo yako yenhengo inotsamira pahuwandu hwebhizimusi uye nhamba yezvigadzirwa zvaunoda kutengesa pane Alietc papuratifomu. Tinoda kuti iwe uve nhengo yeAlietc chikuva kuitira kuti uve nechokwadi chekuti uri bhizinesi chairo uye kuti izvo zvigadzirwa zvauri kupa zvinotengeswa ndezvechokwadi. Izvi zvinoshanda zvakanyanya kune mukana wako seAlietc hauzofaniri kukwikwidza kupokana nemakambani asina mukurumbira.
Kunyangwe iri kugadzira kuraira, kana kugadzira stock kutengesa pamusika wakavhurika, Alietc inogona uye ichakubatsira. Kuongorora pfupi webhusaiti yedu kunoratidza kwauri kuti takazvipira sei kubatanidza vatengi uye vatengesi nevanozvigadzira, kunyanya vagadziri vezvimwe zvigadzirwa.
Tinozviita sei izvi? Nekunyanya kutarisa mazwi akakosha ne Ultra-inoshanda SEO (yekutsvaga injini yekugadzirisa) nzira, tinogona kuve nechokwadi chekuti vese vatengi vezvigadzirwa zvako vanoziva nezvekurarama kwako uye zvaunofanira kupa.
Izvo zvakakoshawo kunzwisisa kuti iwe une kutonga kwakazara kwemaitiro uye kune waunotengesa zvigadzirwa zvako, uye nemutengo wei. Maraki anokwanisa kuchinjika kamwe kamwe uye kugona uye zvishandiso zvekuita, pakarepo, kumusika shanduko kunova iwe unozadzisa mhedzisiro iwe yaunoda, nguva uye nguva zvakare.
Kana uchinge wapedza chimiro chako, iwe wave pachinzvimbo chekutanga kutengesa zvigadzirwa zvako, izvo isu takaita nyore sezvazvinogona kuita. Kunaka kweAlietc ndeyekuti isu tinoda kuti zvese zvive nyore uye zvakaringana, saka une sarudzo yezvisarudzo zviviri, kana unogona kuendesa ese ese sarudzo.
Alietc - Zvakanyanya Kupfuura Musika pamusika